NCHỊKỌTA ZUTERE NJEHIE N'IHU NHAZI MICROSOFT - ITUNES - 2019
Mgbe na-agba ọsọ ụfọdụ egwuregwu na kọmputa Windows, njehie nwere ike ime na ngwa DirectX. Nke a bụ n'ihi ọtụtụ ihe ndị anyị ga-atụle n'isiokwu a. Na mgbakwunye, anyị na-enyocha ngwọta maka nsogbu dị otú ahụ.
Nzọụkwụ DirectX na egwuregwu
Nsogbu kachasị mkpa na DX components bụ ndị ọrụ na-anwa ịgba ọsọ egwuregwu ochie na ngwaike nke oge a na os. Ụfọdụ ọrụ ọhụrụ nwere ike ịmepụta njehie. Tụlee ihe atụ abụọ.
"Emezughị ịmalitepụta DirectX" - nsogbu kachasị mma nke ndị Fans na-enwe site na Blizzard. Mgbe ị na-ebupụ onye nchacha, ọ na-egosipụta windo ịdọ aka ná ntị.
Ọ bụrụ na ị pịa bọtịnụ ahụ Ok, egwuregwu ahụ chọrọ ka ị tinye CD, nke kachasị dị na CD-ROM.
Ọdịda a na-adabere n'ihi enweghị njiko nke egwuregwu egwuregwu ma ọ bụ nke ọ bụla n'ime ihe ndị ọzọ ya na ngwaike arụnyere ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ DX. Ihe oru a di nkpu ma dee ya n'okpuru DirectX 8.1, ya mere nsogbu.
Nke mbụ, ịkwesịrị iwepu nsogbu usoro usoro ma melite ọkwọ ụgbọala vidiyo na components DirectX. Ọ gaghi adighi nma.
Tinyegharịa ndị ọkwọ ụgbọala kaadị vidiyo
Na-emelite ndị ọkwọ ụgbọala vidio NVIDIA
Esi emelite ụlọ akwụkwọ ndị DirectX
Nsogbu na-agba ọsọ n'okpuru DirectX 11
Na ọdịdị, e nwere ụdị API abụọ maka edere egwuregwu. Ndị a bụ kpọmkwem Direct3D (DirectX) na OpenGL. Warcraft na-eji ọrụ mbụ mee nhọrọ. Site na ịme ihe dị mfe, ị nwere ike ime ka egwuregwu ahụ jiri nke abụọ.
Iji mee nke a, gaa na aha nke ụzọ mkpirisi (PKM - "Njirimara").
Tab "Ụzọ mkpirisi"n'ọhịa "Ihe", mgbe a na-agbakwunye faịlụ anyị nwere ike ịgbakwunye "-pengl" nkewa na-enweghị ntụpọ, wee pịa "Tinye" ma "OK".
Anyị na-agbalị ịmalite egwuregwu ahụ. Ọ bụrụ na njehie azaghachi, wee gaa nzọụkwụ ọzọ (OpenGL na Njirimara nke nkwụsị ụzọ mkpirisi).
N'oge a, anyị ga-edezi ndekọ ahụ.
Kpọọ menu Gbaa ọsọ igodo ọkụ Windows + R ma dee iwu iji nweta ndekọ "regedit".
Ọzọ, ị ga-agbaso ụzọ dị n'okpuru ebe nchekwa ahụ "Video".
HKEY_CURRENT_USER / Sofware / Blizzard Entertainment / Warcraft III / Video
Wee chọpụta oke na nchekwa a "nkwụnye", pịa ya na bọtịnụ òké aka ma họrọ "Gbanwee". N'ọhịa "Uru" mkpa ịgbanwe 1 na 0 ma pịa Ok.
Mgbe niile omume, ọ bụ iwu na ị ga-amalite, naanị na mgbanwe ga-arụ ọrụ.
Nnukwu Nchekwa onwe Ukwu 5 na-enwekwa ọrịa yiri nke a, na, ruo mgbe njehie ahụ gosipụtara, ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma. Mgbe ị gbalịrị ịmalite egwuregwu ahụ, ozi na-apụta na mberede: "DirectX apụghị ịmalite."
Nsogbu a dị na steam. N'ọtụtụ ọnọdụ, mmelite ahụ na-enyere aka na nhazi ya. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị mechie Steam ma malite egwuregwu site na iji ụzọ ụzọ desktọọpụ, ọ ga-apụ n'anya. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe, weghachite onye ahịa ma gbalịa igwu egwu dika ọ dị na mbụ.
Esi gbanyụọ Steam
Nsogbu na njehie na egwuregwu dị iche iche. Nke a bụ tumadi n'ihi enweghị ike nke components na ọdịda dị iche iche na mmemme ndị dịka Steam na ndị ahịa ndị ọzọ. Anyị nwere olileanya na anyị enyerela gị aka dozie ụfọdụ nsogbu na ịmepụta ihe egwuregwu kachasị amasị gị.